I-imeyili ku-Acid: Ukuhlolwa kwe-imeyili, Ukuxazulula inkinga kanye Nemikhuba Emihle | Martech Zone
I-imeyili ku-Acid: Ukuhlolwa kwe-imeyili, Ukuxazulula inkinga kanye Nemikhuba Emihle
NgoLwesithathu, ngoMashi 23, 2016 NgeSonto, uJanuwari 15, 2017 Douglas Karr
Kunesizathu sokuthi izinkampani eziningi zihlela ukusebenzisa isikhathi esiningi nemali ekukhangiseni nge-imeyili ngo-2016: ukumaketha nge-imeyili iyaqhubeka nokubamba i-ROI ephezulu kunazo zonke iziteshi zokumaketha ezidijithali.
Bonke abathengisi banabanikezeli babo bezinsizakalo ze-imeyili kanye nohlu lokuhlola lokuthuthukiswa kwe-imeyili. Kepha kaningi kakhulu abawunaki umgqigqo womkhankaso: ukuhlola i-imeyili yabo kumadivayisi amaningi namakhasimende ngaphambi kokusetha umkhankaso ozowusebenzisa. Yize imikhankaso eminingi yokuhlola ngokuthumela i-imeyili kubhokisi labo lokungenayo le-iPhone noma le-Gmail, lokho akwanele. Kungani? Ngoba wonke amaklayenti e-imeyili ahlinzeka ikhodi ngokuhlukile.
I-imeyili ekubukeni kwe-Acid
Thumela i-imeyili ku-Acid inikeza ukuhlolwa kwe-imeyili, ukuxazulula inkinga nokuthuthukile analytics amathuluzi okusiza izinkampani zenze lula futhi zithuthukise imizamo yazo yokuthengisa nge-imeyili. Inkampani ihlola imikhankaso ye-imeyili kumakhasimende nakumadivayisi e-imeyili ahlukahlukene angama-45 futhi inikezela ngamathuluzi wokuxazulula izingqinamba zokunikezwa. Isungulwe ngo-2009, i-imeyili ku-Acid isize izinkampani ezingaphezu kwama-80,000 emhlabeni wonke ukuvivinya ama-imeyili azo.
Abathengisi basebenzisa i-imeyili ku-Acid ukwenza lula ukuhlola ama-imeyili adalwe kusukela ekuqaleni nangaphakathi kwanoma yimuphi umhlinzeki wesevisi ye-imeyili. Kepha akupheleli lapho — i-imeyili ku-Acid inikeza amanye amathuluzi ahlukahlukene, kufaka phakathi:
Isixhumanisi nokuqinisekiswa kwesithombe
Ukuhlaziywa kwekhodi kanye ne-HTML optimizer
Ukubukwa kuqala kwekhasi lewebhu kumakhasimende amaningi wewebhu namadivayisi eselula
Ngokungeziwe kumathuluzi ayo asemqoka, i-imeyili ku-Acid inikeza izinsiza eziningi nokuxhaswa kwamakhasimende okungenakuqhathaniswa. Isithangami somphakathi esakhiwe ngabathengisi be-imeyili, ama-coders nabaqambi siyatholakala kunoma ngubani, mahhala. Futhi i-imeyili ekwi-Acid Resource Center ibamba umtapo wolwazi wezibonisi ze-imeyili eziphendula mahhala nezingamanzi, iziqondiso, amaphepha amhlophe nokuningi.
Ukubaluleka Kokuhlolwa Kwe-imeyili
Amaklayenti e-imeyili namadivayisi eselula abonisa i-HTML ngokwehlukile ngoba iklayenti ngalinye linikeza i-HTML ngendlela ethile. Kungakho ikhodi yakho ingahle ishiywe ivunyelwe ku-Outlook kepha ibukeke yinhle kuklayenti lakho le-Gmail.
Uma ungavivinyi ukuxilonga izingqinamba zokufaka amakhodi nokusabalalisa ngaphambi kokusebenzisa umkhankaso wakho, ukubandakanyeka kwakho kwe-imeyili (kanye ne-brand ne-ROI) kungathinteka kabi. Eqinisweni, amaphesenti angama-70 wabantu abathi bazosusa i-imeyili ngokushesha uma inganikeli kahle ebhokisini labo lokungenayo.
Imikhuba Emisha Yokuthuthukiswa Kwe-imeyili
Uma umusha emhlabeni we-imeyili, ungathola lonke lolu lwazi lucindezela. Izindlela zanamuhla zokubhala ngewebhu azinakho ukuxhaswa okuncane kumakhasimende we-imeyili futhi okwamanje abantu baqhubeka bekutshela ukuthi usebenzise amatafula. Nansi into, amatafula anekhodi ye-imeyili ayisidingo, ngakho-ke hlela ukuba nguchwepheshe kuwo. Ezinye izikhombisi ezimbalwa:
Idizayini eyodwa yekholomu kwenza impilo ibe lula! Kwanele kuma-imeyili amaningi (izincwadi zezindaba ziyehlukile) futhi kuzokwenza kube lula ukwamukela amadivayisi eselula.
Sebenzisa i-600px ububanzi ukulingana kahle kumakhasimende amaningi ewebhu nawe-desktop. Usayizi ungancishiselwa phansi ukuze ulingane ezikrinini zeselula usebenzisa imibuzo yemidiya noma ukwakheka kwe-hybrid fluid (funda ukuze uthole okwengeziwe ngalokho).
Uma ungabaza, table. Khohlwa ama-divs nokuntanta. Amathebula ayindlela ethembeke kunazo zonke yokufeza ukwakheka okungaguquguquki. Le ndlela isisekelo sedizayini ephendulayo neyoketshezi futhi ikuvumela ukuthi usebenzise ithuba lokuqondanisa ukwakheka komklamo wakho.
Gcina abasebenzisi beselula engqondweni. Abanye abaklami baze bashintshela kumklamo "weselula kuqala". Le ndlela iphumelela ikakhulukazi kuma-imeyili alula njengokusetha kabusha iphasiwedi, ama-imeyili wokusebenzelana, nokuvuselelwa kwama-akhawunti.
Futhi i-imeyili ku-Acid isanda kukhipha ifayela le- mahhala, umhleli we-imeyili osuselwa kuwebhu. Lo mhleli uvumela abasebenzisi ukuthi bakhe, bahlele, babuke kuqala futhi basebenzise ama-imeyili kuhlelo lokusebenza olulodwa ngesikhathi sangempela.
Vivinya, Vivinya, Vivinya!
Ukufakwa amakhodi nge-imeyili kungaba yinkohliso. Ukuphela kwendlela yokuqiniseka ukuthi i-imeyili yakho izobukeka inhle yonke indawo ukuyivivinya. I-imeyili ku-Acid ingasiza ngalokho ngokukhiqiza izithombe-skrini ze-imeyili yakho kuwo wonke amaklayenti namadivayisi e-imeyili athandwa kakhulu ngemizuzwana engaphansi kwengu-30.
Ngaphezu kwezinsizakalo zokuhlola i-imeyili, i-imeyili ku-Acid inikezela ngamathiphu wokuxazulula inkinga kanye nemininingwane nganoma yiziphi izingqinamba ohlangabezana nazo, ukuhlolwa kwogaxekile kwangaphambi kokuthunyelwa, kanye nokuthunyelwa kwe-imeyili okuthuthukile analytics. Le nkampani ibuye ibhale ibhulogi evelele ehlanganisa izihloko ezifana nalezi Ukuxazulula inkinga Ubude Bomugqa ku-imeyili ye-HTML or Amaqhinga amahle kakhulu wokuThuthukiswa kwe-imeyili kanye namaHacks.
Ngenqwaba yamakhasimende e-imeyili namadivayisi atholakalayo, ukuhlolwa kwe-imeyili akuyona into elula; kuyisidingo. Thatha imizamo yakho ye-imeyili uye ezingeni elilandelayo:
Bhalisela Isivivinyo SAMAHHALA Sezinsuku Eziyisikhombisa se-imeyili ku-Acid!
Tags: imeyiliumakhi we-imeyiliukwakheka kwe-imeyiliukuthuthukiswa imeyiliumhleli we-imeyiliimeyili ku-asidiUkunikezelwa kwe-imeyiliukuhlolwa kwe-imeyiliububanzi be-imeyilii-imeyili ephathekayoumhleli we-imeyili osuselwa kuwebhu
Yibuphi Ubuchwepheshe Abatshalizimali Be-C-Level Abatshala Kuyo?
I-ROBO: Abathengi Bwanamuhla Bacwaninga Kanjani Ku-inthanethi bese Bathenga Okungaxhunyiwe ku-inthanethi
Ngo-Apr 18, i-2016 ku-10: 19 AM
Amathiphu amahle! Kuzwakala njengethuluzi elihle, yize sengivele ngisebenzisa i-GetResponse. Kubaluleke kakhulu ukwenza izivivinyo ze-A / B zemikhankaso ye-imeyili. Okuthile okubukeka kukuhle kungahle kungabi ngokombono wabanye.